Hluttaw News | NLD | Page 4
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 19, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
နေပြည်တော်၊စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် သည် ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် Mr. Fabrizzio Carboni အား ယနေ့ မွန်းလ...	Read more
၂၀၁၇ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 18, 2017 In: Breaking News, Hluttaw News, NewsNo Comments
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၇ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ (International Day of Democracy 2017) အခမ်းအနားကို ယနေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခွဲတ...	Read more
Sustainable Development Goals (SDGs) and UN Global Compact (UNGC) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 18, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၇ ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ Media Corner ၌ ယနေ့နံနက် ၁၀နာရီအချိန်တွင် ပါမောက္ခဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်က Sustainable Development Goals (SDGs) and U...	Read more
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 11, 2017 In: Hluttaw News, State CounsellorNo Comments
နေပြည်တော် – စက်တင်ဘာ ၈ ရက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက် အမြဲတမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Zhang Dejiang ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့သို့ ချစ်...	Read more
နေပြည်တော် – စက်တင်ဘာ ၈ ရက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် သည် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရ...	Read more
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 05, 2017 In: Breaking News, Hluttaw News, NewsNo Comments
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်း မြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.Hong Liang အား စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမ...	Read more
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို သြဂုတ် ၃၁ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ကျင်းပခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း များကို မေးမြန်းကြ...	Read more
ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ လေးစားလိုက်နာအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က တိုက်တွန်းပြောကြား
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဒီမိုကရေစီကို ဦးဆောင်နေသူများပီပီ ပြည်သူလူထုကိုလည်း ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ လေးစားလိုက်နာအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် စေလိုကြောင်း ပြည်သူ့လွှ...	Read more
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာတော့မည့် ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Roland Kobia အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဩဂုတျ 21, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Roland Kobia အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်...	Read more
Posted By: mygate wayon: ဩဂုတျ 15, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
Zawgyi Version ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ဝင်းနှင့်အတူ ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးနေဖူးဗဆွေတို့သည် The World Bank မှ တာဝန်ရှိသူမ...	Read more